Intsha mayigxile esikweni layo nasemikhubeni yakwabo - Bayede News
Ikhaya elashiywa ngabazali liba yikwaMachanca kodwa uma linezingane ezifundisekile usiko nemikhuba yalo liba yisimakade alisoze lashabalala. Uma ubheka uhlaka lwezimpi zasendulo kuleli gabade eliseningizimu amakhehla ayehamba phambili ebambisene nezalukazi zawo eminxeni eyahlukahlukene futhi ethinta ulwazi olunzulu.
Ngisho intelezi lena yayithakwa ngisho yibhungu lilungisela ukuya emdlalweni noma odwendweni, amatshitshi namajongosi ayekhuliswa ngolwazi lwezihlahla ezingabaswa nezingangeni egcekeni ezingafaka izulu ekhaya. Uma ubheka impi yaseSoweto kowe-1976 lapho obaba bethu badingiswa baboshwa abanye babanjwa isamuku bengaphumi ezindlini zabo njengobaba uSobukwe, abanye behudulwa ngezimoto lapha ngingabala uMnu uSteve Biko ongasekho.
Ngisho omama bethu ngaleso sikhathi babe khonjwe ngenjumbane. Uma ungabheka impilo eyayiphilwa ngumama uWinnie Mandela. Sihlehle siye ezikhathini lapho omama bagxoba itoyitoyi beyolwela leli lizwe. Intsha ye-1976 iyaludinga ubhuklaba noma inkunzi yehlombe kubongwe ukuthatha kwabo isibindi ezimfundisweni zalabo ababandulela badela izimpilo zabo bazilahla amakhahlangana kuhle koThukela luziphosa olwandle.
Ngakho-ke ukuthwalwa kwamabhodlela aqukethe amantshangantshanga emakhanda kungenkulu inhlamba kulabo abadela impilo nemizimba benzela ikusasa lethu. Izinduna zale mpi ezifana noTsietsi oHector ngiyacabanga ukuthi amande abo afuna ukukhahlela inhlabathi uma ebuka indlela esenza ngayo sidakwa ngumbuso abasishiyela wona nakuba kungembuso kepha ukuxegiswa kweketango kowoHlanga. Ngikusho lokhu ngoba uma ubheka igama elithi intando yeningi lisho ukuthi sisesigabeni sokuzikhethela umbuso kodwa kunezingcindezi ongeke wazinaka kodwa ezinomthelela emiphumeleni yokuqoka kwethu.
Ngabe abazali baboshiwe yini nabo uma intsha yethu izothwala utshwala ekhanda? Ngabe okhokho bethu bona babe nawo yini lo mzizizi ngoba asibabonanga bethwele omancishana emakhanda nomama bethu asikaze sibabone bethwele izinkamba befequza nazo. Le mpi yowe-1976 inkulu kithi futhi ingumlando obuhlungu ovusa isifesane nozozo kepha uphinde usiphe ithemba langomuso ukuthi nathi sisenganqoba empilweni, kodwa kanjani obaba beboshwe ezingqondweni? Sesigcina ngokubabona ezithombeni bebukisa kugcine lapho noma bethengela odade bethu utshwala ebumnandini uma nithatha nibheka niya kuphi?
Uma intsha eyaphila ngowe-1976 yakwazi ukusukuma ilwe nakuba abaholi ababengabazali basebeboshiwe kodwa yalwa ngabe thina emlandweni siyobizwa ngaliphi igama.
Sikhala ngomhlaba kodwa izingane zethu zivuka ziphafuze izidakamizwa zothe ilanga kanti iyiphi le mfundiso esiyishutheka kubo ngoba ukhamba luvame ukufuza imbiza. Imilando yefana nobuso besibili bona obuhlalela ukuthatha izifundo kulabo abasendulela bube obunye ubuso bubheke ikusasa. Yebo singaqhubeka sibe zinhlekabayeni kodwa izwe liyaqhubeka liyafa imiqondo yezingane zethu iyabuna engabe ziyotakulwa ngubani ngoba kuganene imithuthwane nje.
Kade sibona kuvezwa obaba ngosuku lwabo kuyo le nyanga kuvezwa ngisho abantu abangakwazi ukubaluleka kwesiko elifana nenhlawulo kodwa ngapha utuswa yizwe kodwa isisekelo asibonwa, uma sikhuluma ngobumqoka balenyanga kumele kujulwe kubhekwe umlando nempilo yangaleso sikhathi kuqhathaniswe nemanje kubhekwe esingakucakula kube ngumsoco wekusasa hhayi lembudane esiyiyo ejabulela izingqweqwe kepha ibe icebile. Ma Afrika nicebile kodwa nihlwempu ngenxa yokwehlukana nempande.
Afrika uyisihlahla esefana nembali ujika nelanga kodwa zihlosukile izimpande thola umhlabathi unisele ubuyise isizikithi sakho. Ngeke kusisize ukubungaza le mpi ngemifaniswano nje futhi osukwini olulodwa kodwa umphumela uyefana wukufa kwentsha yethu. Kuzoba nzima uma sizogaba ngemigubho kodwa imfundo ingabonwa ngoba kuqala ngomcabango kuze ukwenza bese kusala umlando kugcine kuwulwazi.
Ngabe siyabubona na ubumqoka elwazini olukhiqizwa yimilando noma sifuna ukubungaza sishaye ingoma? Ayidumi kanje uma izohamba neyaseNdondakusuka yabonakala ngokudonda ukuthi ayifuni ukusuka manje thina njengoba sesiphenduke izindandanda ezingathi shu ezazi ukuthi kumnandi uma sigoxa izidakamizwa ngosuku olumqoka kangaka ngabe sithini empeleni?
Nebala umlando uyosahlulela ngesihluku; ake sibhukule sithintithe izintuli eziqaqele emasikweni ethu sicacisele intsha yethu ngemisuka yethu ukuze sizoba nesizukulu esihlakazekile emakhanda. Bukani abezizwe indlela abasukumela ngayo okwabo amabhunu awamaningi kangako kodwa ulimi lwawo aluconsi phansi bangamane balukhothe phansi njengoshukela. Uye uzwe abanye bethi iphepha iBAYEDE linesiZulu esiqinile kodwa uma kungezinye izilimi baze bashuthe bebukisa ngoba befuna kuthiwe wazi isilumbi kangcono.
Ngakho le nyanga iyadinga ukusukunyelwa ngezimvo ezintsha nezizokwakha umuntu omusha futhi avame ukugxila esikweni lakhe.
nguMbuso Khoza Jun 25, 2021